musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet iri kuyedza itsva isingabatike Yakavimbika Boarding sarudzo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Innovative guest boarding solution inoratidza mukana weramangwana wekusabatika uye kwakachengeteka sarudzo dzekukwira dzevafambi vekuCanada.
Nezuro, WestJet, pamwe neTELUS, yakaedza Trusted Boarding, nzira isingabatike inoshandisa yakachengeteka uye yakachengeteka tekinoroji yekutarisa kumeso kuratidza kuzivikanwa kwevafambi vasati vakwira ndege. Kutongwa kwacho kwaive kwekutanga-kwerudzi rwayo muCanada uye kwakaitika paYYC Calgary International Airport.
"Chiitiko chekufamba chiri kuitika kuti chisanganise maitiro akawanda asingabatike uye WestJet iri kuvandudza kuona kuti rwendo rwevaenzi vedu rwuri nani kuti ruve rusina mutsetse uye runoshanda, tichikoshesa kuchengetedzwa kupfuura zvese," akadaro Stuart McDonald, Mutevedzeri weMutungamiriri uye Chief Information Officer. "The Trusted Boarding kutongwa mubatanidzwa pakati petekinoroji neWestJet uyo mune ramangwana waizobatsira vamiririri vedu nevaenzi vedu nekusimbisa gwaro risingabatike."
WestJetMuyedzo weTrusted Boarding wakaratidza kuti kushandisa zvine hungwaru kwebiometric boarding tekinoroji kunopa magwaro akakwana uye kunodzivirira vanhu vasina mvumo kukwira ndege. Vaenzi vakaedzwa vakakwira ndege yeWestJet 8901 kuburikidza nekuongororwa kwechiso nechikwama chavo chedigital identity paEmbross' Canadian yakagadzira biometric hardware uye boarding application paGedhi 88. Kutongwa kwakaratidza danho rekutanga rekushandisa tekinoroji sezvo WestJet ichishanda neHurumende yeCanada kutsvaga. kubvumidzwa kuzere kwekushandiswa kwayo senzira yakachengeteka uye yakachengeteka yenguva yemberi WestJet kukwira kuCanada airports.
“Sezvo kufamba nendege kunovhurwa zvishoma nezvishoma, ruzivo rwevatyairi runoenderera mberi nekushanduka. Yedu yepasi, yakavakirwa muCanada mhinduro inobvumira vafambi kuti vanakirwe neyakachengetedzeka, isingabatike chitupa ruzivo, uku vachiona kuti vanokwanisa kuchengetedza kudzora data ravo, "akadaro Ibrahim Gedeon, Chief Technology Officer. TELUS. "Iyi nhanho yekutonga inogadza uye inowedzera kuvimba kwevatengi nekugadzirisa kuvanzika, chengetedzo, uye njodzi yedata kubva pakutanga, uku ichipa pachena kune vatengi."
Trusted Boarding inotsigira imwe dhijitari yeCanada ichishandisa Canadian innovation. Iyo inoshandisa inozvimiririra identity ecosystem (kugadzirwa kweyakasarudzika, yakavanzika uye yakachengeteka kubatana pakati pemapato maviri akavimbika) kuburikidza neTELUS-yakapihwa yedhijitari chitupa chitupa mune smartphone application yeIOS uye Android. Inopa kusimbiswa kwegwaro risingabatike, uko kutariswa kwechiso kwechiso kunofananidzwa nemagwaro emufambi akaiswa kuapp asati akwira. Zvakakosha, iyo app inoita kuti vashandisi vachengetedze ruzivo rwavo nguva dzese, zvichireva kuti vanogona kugovera zvakachengetedzeka zvitupa zvavo uye nekukanzura kuwana kana data risisadiwe.
Nzvimbo yekuzivikanwa yakagadziridzwa ne37 uye kutendeseka kwegwaro kupihwa naOaro, kuve nechokwadi kuti mhinduro inotevera kuchengetedzwa kwedata uye mitemo yekuvanzika yakavharwa pasi pePersonal Information Protection uye Electronic Documents Act (PIPEDA).